19 / 08 / 2019 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
[17 / 09 / 2019] အဝေးပြေးလမ်းမကြီး 18 ။ လက်မှတ်ထိုးကာလစုပေါင်းအလုပ်သမားသဘောတူညီချက်ကို	06 တူရကီ
[17 / 09 / 2019] IETT မန်နေဂျာများ, İmamoğluသွန်သင်ကွင်းဆင်းအညွှန်း	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[17 / 09 / 2019] ကုန်တင်ရထား Mersin ၏လှည်းလွဲချော်ရပ်တန့်	33 Mersin
[17 / 09 / 2019] IBB အသုံးပြုခြင်းညမြေအောက်၏နံပါတ်ကြေညာ	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[17 / 09 / 2019] MDTO, တူရကီ-ပြင်သစ်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးပွုလုပျခွငျး Host မှ	33 Mersin
နေ့: သြဂုတ်လ 19 2019
လြယ္ကူ Access ကိုအတူ 3103ကောင်တီလိုင်း
မေတ္တာနဲ့နိုင်ငံသားများကအသုံးပြုသည်၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများulaşımpark Inc ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထွက်သယ်ဆောင်ကြောင်းအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်။ 310 ၏ Gebze နှင့် Darica ခရိုင်အကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုင်းပေး Dilovasi လည်းထိုအလူကြိုက်များယာဉ်များတစ်ဦးအဖြစ်ထွက်ရပ်။ အဆိုပါခရိုင်3[ပို ... ]
တူရကီ-Konya YHT လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: 183 + 060-187 + 130 တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေးညွှန်ကြားမှု (TCDD) 2019 / 361123 JCC အရေအတွက်တူရကီ-Konya YHT လိုင်းမိုင်အကွာအဝေးနှုန်း 914.045,17 အကြောင်းကိုကုန်ကျ၏တင်ဒါရလဒ်ပြုလုပ်ခြင်းအဆိုပါ guardrail အကြား: 183 + 060-187 + Guardrail လုပ်ငန်းခွင်အကြား 1304ကုမ္ပဏီတင်ဒါကမ်းလှမ်းမှုပြုမိ [ပို ... ]
အဆိုပြုချက်ကို 81 TL, ထိုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတင်ဒါ 2019 ကုမ္ပဏီတခုနှင့်နူးညံ့သောသန့်ရှင်းရေးအတွက် YHT 300019DBM Mıntıkaမြောင်း၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်. ပေးထားသောတူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေးညွှန်ကြားမှု (TCDD) 1.189.720,96 / 81 JCC အရေအတွက်တင်ဒါရလဒ်ပြုလုပ်ခြင်း၏ YHT 41DBM Mıntıkaမြောင်းသန့်ရှင်းရေး [ပို ... ]
TCDD3ကြမ်းပြင်နယူးရုံးအဆောက်အအုံ
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, TCDD အဆိုပါ protocol ကိုအတူ 3-ပုံပြင်ဝန်ဆောင်မှုအဆောက်အဦသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကိုပြု၏။ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, လက်ဝဲ3ပုံပြင်ဝန်ဆောင်မှုအဆောက်အဦမှတူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) ၏သမ္မတနိုင်ငံနှင့်အတူ protocol ကိုသဘောတူညီချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆောက်အဦး၏စုစုပေါင်းဧရိယာရှုခင်းစတုရန်းဖြစ်ပါတယ် 910 [ပို ... ]
Bulak ၏ရပ်ကွက်အတွင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုသောသူသည် Kavala နှင့် Turhan ဝန်ကြီးများမြို့ချိတ်ဆက်ထားပြီး Trabzon Ortahisar စတော်ဘယ်ရီ, ထိုချက်တင်၏နိုင်ငံသားများ၏ပြဿနာများနှင့်တောင်းဆိုချက်များကိုနားထောင်တယ်။ အတော်ကြာအရေးကြီးသောဒေသများ၌ကြီးစွာသောအကွာအဝေးကပြောသည်ခံရဖို့တူရကီအနေဖြင့်အခြေခံအဆောက်အဦများစက်မှုလုပ်ငန်းရန်, ပညာရေးမှကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Turhan, [ပို ... ]
Vangölü Express ကို Shuttle နာရီနှင့်ရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ
တောင်ပေါ်တောင်စောင်းကနေ Tatvan နှင့်တူရကီအကြားပြေးဆွဲမှုမရှိVangölü Express ကို, ချွတ်အဓိကလိုင်းရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးသဘာဝအလှအပအနေဖြင့်ပြီးခဲ့သည့် TCDD တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗန်သာယာသောခရီးသွားလာမှုကိုမြည်းစမ်းချင်သောသူတို့အဘို့ကိုပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုနှင့်များ၏ခရီးသွားနှင့်အတူလိုက်လိုသော [ပို ... ]
တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်, In-အိမ်၏နယ်ပယ်အတွင်းဝန်ထမ်းရထားစနစ်များဦးစီးဌာန၏အတ္တအထွေထွေညွှန်ကြားမှု, "ထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစီမံခန့်ခွဲမှုလေ့ကျင့်ရေး" ပေးထားခဲ့သည်သင်တန်းပေး။ တူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Mansoor ပထမဦးဆုံးလုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၏နည်းဥပဒေနှေး [ပို ... ]
Denizli ဒေသ660 သီးခြားနယူးဘတ်စ်ကားလိုင်း
DENiZLiLiLER ပိုမြန်, တတ်နိုင်နှင့်အဆင်ပြေ Denizli မြူနီစီပယ်သွားဖို့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ဒီအသွင်ကူးပြောင်းရေးစတင်ခဲ့သောကြောင့်ပင်အများအပြားအသစ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အလေ့အကျင့်များတတ်၏။ တတ်နိုင်,6တဲ့ Metropolitan နိုင်ငံသားများအစာရှောင်ခြင်းကြောင့်ဘတ်စ်ကားလိုင်းသက်ဝင်စေဖို့သီးခြားဧရိယာ၌ 60 [ပို ... ]
ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်Ünyeရဲ့ရဲတိုက်, Düzsaylနှင့်ရပ်ကွက်အတွင်း Akkus-Niksar ငြင်းပယ်ပါကအလုပ်လုပ်ချိတ်ဆက်သောကတ္တရာလမ်းအတွက်လမ်းကြောင်းဖွင့်လှစ်။ ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mehmet Hilmi Guler "စံချိန်စံညွှန်းမြင့်မားတဲ့ခဲ့ကြသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းခေတ်မီခြင်းနှင့်အဆင်ပြေနည်းလမ်းတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ဆက်လက်" [ပို ... ]
တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ် Project မှသြဂုတ်လ 30 ဂရိတ်နေ့စတင်
19 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 1
တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ် Bosphorus အစ္စတန်ဘူလ်အဘို့ကြီးသောအရေးပါမှု၏သမိုင်းဝင်စီမံကိန်းတွင်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးပါပြီ! ဒီနှစ်မှာတော့ Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားကိုသြဂုတ်လ 30 2019 ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာပါလိမ့်မယ်။ သြဂုတ်လထဲမှာ 30 ရွေးချယ်ထားသောရက်စွဲမှာ, 30 သြဂုတ်လအောင်ပွဲခံနေ့၏အရေးပါမှုပါပဲ။ တူရကီရဲ့ [ပို ... ]
Kayseri leash ၏အရည်အသွေးနှင့်နှစ်သိမ့်မှုနှင့်အတူကျွန်တော်ကတ္တရာသုံးလမ်းတိုးမြှင့်
နွေရာသီစာသင်လမ်းခင်း Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, အလုပ်ဖြတ်တောက်ခြင်းမြန်နှုန်းအပေါ်ဆက်လက်နဲ့အတူစတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမြို့ရဲ့အဓိက Boulevard ကျောက်ခေတ် mastic ကတ္တရာအရည်အသွေးနှင့်နှစ်သိမ့်တိုးမြှင့်ဖို့တွယ်ကပ်။ မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ နွေရာသီကာလနှင့် တွဲဖက်. Mamdouh Büyükkılıç'ın, [ပို ... ]
Yedikuyu နှင့် Bertiz Paths ကိုပြုပြင်တာတွေ
လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများနှင့်ပြုပြင်အလုပျအတှကျ Kahramanmaras တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Yedikuyu နှင်းလျှောစီးနှင့် Bertiz ရပ်ကွက်အတွင်းမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ Kahramanmaras တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, တဦးကိုလက်ပေါ်လမ်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ကတ္တရာအတွက်ရရှိနိုင်ပါတလက်ပေါ်ပြုပြင်အလုပ်၏အတိုင်းအတာအလုပ်ဆက်လက်နေစဉ် [ပို ... ]
ကာဇက်စတန်နှင့်တူရကီအကြားကွဲပြားခြားနားသော Modes သာအတွက် TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှ General Manager Erol Arikan နှင့် TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan သင့်လျော်သောသွင်းကုန် / အဆိုပါရထားလမ်း၏သဘောပေါက်ဘို့ကာဇက်စတန်မီးရထား၏ပြည်ပပို့ကုန်တင်ပို့ရောင်းချမှုအထွေထွေမန်နေဂျာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူ Astana အတွက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ စာချုပ် [ပို ... ]
အဆိုပါစည်ပင်သာယာန်ဆောင်မှုအားဖြင့်ယူ 2010 1 ခုနှစ်တွင် Antalya တဲ့ Metropolitan ။ ဇာတ်စင်အလင်းရထားလိုင်းကို, စတင်သည်နှင့် Fatih ခရိုင် Square ကိုဘူတာရုံထဲမှာအဆုံးသတ်ထားသည်။ 11 ကီလိုမီတာအကြောင်းကိုလိုင်း။ ရှည်လျားသော 16 စုစုပေါင်းခရီးသည်ဘူတာရုံရှိပါသည်။ အားလုံးဘူတာမှာလမ်းသွားလမ်းလာ [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ် 8 ရာခိုင်နှုန်းဆီစီးပွားရေးထိန်းသိမ်းထား
ပြည်နယ်လေဆိပ်အုပ်ချုပ်ရေး (Sama) အထွေထွေမန်နေဂျာနှင့်ဥက္ကဋ္ဌHüseyin Keskin သည်တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းအားဖြင့်အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်ရဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်အချိန်အတွက်ရလဒ်အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏အစီအစဉ်များနေ့တိုင်းရာခိုင်နှုန်း 1300 မိနစ် 8 လောင်စာထိရောက်မှုသူရရှိနိုင်မည်ဟုဆိုသည်။ အကြောင်းအရာပေါ် [ပို ... ]
Google က Apple, Microsoft ကမီးရထားအဆင့် Crossing ဂရုမစိုကျဘူး
အမေရိကန်က Google က Apple, Microsoft နှင့်အညွှန်းမြေပုံ၏အခြားနည်းပညာကုမ္ပဏီများအတွက်အသွားအလာဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုထိန်းချုပ်ကြောင်းအဖွဲ့အစည်းများ, United States မှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအဆင့်ကိုဖြတ်မှာဖြစ်ပေါ်မတော်တဆမှုအတွက်လူရာပေါင်းများစွာအသက်အတွက်ဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကမြေပုံအညွှန်းအတွက်အဖွဲ့အစည်းများ၏သတိပေးချက်များနေသော်လည်း [ပို ... ]
Gaziantep အတွက်ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်လှုပ်ရှားမှုများ
ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်ပွဲများ Konya အတွက် Start
Eurasian Path ကို Protocol ကိုလက်မှတ်ထိုး
Afyonkarahisar အတွက်5Hale ကအဆင့် Crossing အလိုအလျောက် Barrier ဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့အခမဲ့
မြို့ကြီးများ Make မှ YHT Metropol Sivas
တပ်ဆင်ရန်အဘယ်မှာရှိ Manisa အတွက် Volkswagen ကစက်ရုံ?
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ စက်တင်ဘာလ 2019 (298) သြဂုတ်လ 2019 (507) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)